Coronavirus 58 amin'ny 121 no sitrana hatreto
Covid-19 Midangana hatrany ny isa
Nanao fitiliana 93 ny CICM, ka tany Toamasina ka 37 ny singa avy any Toamasina. 13 no voa (5 Analankininina, 2 Kaominina Ambonivohitra, 1 Campus Universitaire, 1 Ankirihiry Avaratra, 1 Mangarano,
Paul Rabary « Mbola hisy 2 na 3 volana ny Covid 19 »
Ny 23 martsa 2020 no nihiboka voalohany ny malagasy. Mbola latsaky ny 100 ny voan’ny Coronavirus tamin’izany ary tsy mbola nisy ny maty, hoy ny mpahaifiarahamonina, Paul Rabary.
612 no voan’ny covid-19 Niakatra ho 10 ireo marary mafy
Niampy 26 ny trangana coronavirus eto Madagasikara, ka nampiakatra ny isa manontolo ho 612 hatreto. 9681 ny fitiliana rehetra vita ny 19 martsa hatramin’ny 25 mey teo.
Antoko DHD “Efa ny mahaolona mihitsy no ataon’ny fitondrana antoka”
Tsindrona, hatao andrana amin’ny marary Covid 19 ao Toamasina sy Antananarivo, hono.
Fanafodin’ny Covid 19 atsindrona Tsy CVO fa zavatra hafa mihitsy
Hanomboka ny andrana covid organics, ary diso tanteraka ny filazana fa ny CVO no navadika tsindrona, hoy ny Tale misahana ny raharaha momba ny lalàna eo anivon’ny Fiadidian’ny Repoblika Dr Sahondraharimalala Marie Michelle, nampian’ny Pr Luc Rakotovao omaly.
Mararin’ny Covid-19 ao amin’ny Foyer Canada Tsy manaiky hanandramana ilay tsindrona
Namoaka sy nitantara ny nanjo azy ireo olona miisa 48 voan’ny covid-19 ao amin’ny Foyer Social Canada ka nandefa solontena 03, raha vao nahita ireo mpanao gazety tonga hiatrika ny fanolorana fitaovana nataon'ny vokovoko mena, raha ny fampitam-baovao.
Rado Ramparaoelina “Tokony mitovy ireo fepetra mihatra isaky ny kaominina”
Tsy mitovy ny andraikitra raisin’ireo Ben’ny tanana tsirairay avy ao anatin’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano
Tsy nisy nahitana tranga vaovao ireo olona nakana singa hanaovana fitiliana hatramin’ny omaly 12 ora atoandro, ka mijanona ho 121 ny voa hatramin’izay, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle.
Nisy olona 6 vaovao sitrana ka 58 ny fitambarany, ary 63 ireo mbola manaraka fitsaboana, raha ny antontan’isa ankampobeny. Tsy misy ahiana ny ain’ireo voa. Efa 5 andro izay tsy nisy tranga vaovao intsony. Misy ny mametra-panontaniana hoe angaha tsy misy fitiliana intsony? Mitohy isan’andro ny fitiliana, hoy ity profesora ity. Misy laboratoara iray hafa dia ny Centre d’Infectiologie Charles Mérieux. Efa tonga ny fampitaovana eny amin’ny HJRA. Ireo olona misy soritr’aretina no hanaovana izay fitiliana izay. Eo ihany koa ireo olona ahiahiana ho akaiky sy nifampitakosona tamin’ireo olona voa. Na izany aza, vitsy ny olona atao fitiliana isan’andro eto amintsika, raha jerena amin’ny tatitra nataona tompon’andraikitra iray anivon’ny Minisiteran’ny fahasalamana. Tamin’ity herinandro ity mantsy, dia 29 no notiliana ny alatsinainy, 32 ny talata, 35 ny alarobia, ary 17 omaly alakamisy. Hatramin’izay rahateo dia 2313 no natao fitiliana PCR, raha ny tatitra. Fanambin’ny Filoha anefa ny hahavitana fitiliana 1000 isan’andro. Ao anatin’ny fiverenanana tsikelikely amin’ny fiainana andavanandro isika izao, ka ny hiasa, hamonjy ny toeram-pianarana no antony tsy azo hanorana. Tena mifanaretsaka anefa ny olona. Ny zavatra hita anefa dia miala ny arovava, hoy ny Pr Vololontiana Hanta. Misy ihany ny olona manaraka ny fepetra Raha tsy tiantsika hitohy lava be io, dia hajaina ny fepetra hahafahantsika tena miverina amin’ny fiainana andavanandro. Ny manahirana dia ny fisiana olona mety voa kanefa tsy maneho soritr’aretina kanefa afaka mamindra, hoy izy.